အယုဓျာ - ဝီကီပီးဒီးယား
အယုဓျာ (ထိုင်းဘာသာ:พระนครศรีอยุธยา, aˡjutʰajaː) ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အယုဓျာတိုင်း၏ ရှေးမြို့တော်ဟောင်းဖြစ်၍ ဘန်ကောက်မြို့မှ မြောက်ဘက်သို့ မိုင်၅ဝ ခန့်အကွာ၊ အောက်မဲနမ် (ချောင်ဖယား)မြစ်အတွင်းရှိ ကျွန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ အယုဓျာ မြို့ဟောင်းကို ခရစ် ၁၃၅ဝ ပြည့်နှစ်၌ ပထမ ရာဇာဓိပတိဘွဲ့ခံ ဗြးအုထုံအမည်ရှိ ယိုးဒယားဘုရင်တစ်ပါးက စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရာမှ ခမ်နားကြီးကျယ်သော မင်းနေပြည်တော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းအင်အားကောင်းလာပြီး ရှေးဦးပိုင်း ထိုင်းမြို့ပြနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့် သောက္ကတဲ၊ ပိဿလောက်စသည်တို့ကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ ယင်းသို့ ယိုးဒယားမင်း အဆက်ဆက် စိုးမိုး အုပ်ချုပ်ခဲ့၍ နှစ်ပေါင်း ၄၁၇ နှစ်တိုင်တိုင် မားမားမတ်မတ်တည်တံ့ခဲ့သော အယုဓျာနေပြည်တော်ကြီးသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၂၈ ခုနှစ်၌ နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ သော ယိုးဒယား-မြန်မာစစ်ပွဲတွင် မြန်မာတို့လက်သို့ကျရောက်၍ ရာဇဝင်တင်လောက်အောင် ဆုံးရှုံး ပျက်စီးခဲ့ရလေသည်။ ယခုအခါ၌ကား ယခင်ကလောက် စည်ကားခြင်း မရှိတော့ဘဲ ဘုရားပျက် ကျောင်းပျက်များသာ ရှိနေသည်။ အယုဓျာမြို့သည် ကျွန်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည် ဖြစ်ရကား မြစ်ကမ်းနားတစ်လျှောက်ရှိ အဆောက်အအုံများမှာ မိုးရာသီ မြစ်လျှံတက်မှုမှ လွတ်ကင်းရန် တိုင်များဖြင့် အမြင့် ဆောက်လုပ်ထားကြသည်။ မြို့တွင်း၌ မဲနမ်မြစ်မှနေ၍ မြို့ကို ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်ထားသော တူးမြောင်း အမြောက်အမြားကို မြို့တွင်းကူးသန်းသွားလာရေးအတွက် အသုံးပြုကြသည်။
ကမ်းနားတစ်လျှောက်နှင့် တူးမြောင်းများထဲတွင် ဆင်းရဲသား များ နေထိုင်ကြသော လှေအိမ်နှင့် ရေပေါ်ဈေးဆိုင် အမြောက် အမြားရှိရာ ဈေးဝယ်ရာ၌ လည်းကောင်း၊ တစ်အိမ်နှင့်တစ်အိမ် ကူးသန်းသွားလာကြသည်။ မြို့အတွင်းဘက်၌ကား လမ်းကြီး၊ လမ်းငယ် အသွယ်သွယ် ဖောက်လုပ်ထားသဖြင့် ကုန်းလမ်းခရီးဖြင့်လည်း အခြားမြို့များသို့ လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်သည်။ အယုဓျာမြို့သည် ယိုးဒယားနိုင်ငံ၏ ဆန်စပါး အများဆုံး ထွက်ရာ ဗဟိုဌာန ဖြစ်သည်။ ဆန်နှင့် ကျွန်းသစ်များကို အမြောက်အမြား လုပ်ကိုင်ကြ၍ နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချသည်။ ငါးဖမ်းခြင်း အလုပ်ဖြင့်လည်း အရေးပါသောမြို့ ဖြစ် သည်။ အယုဓယမြို့မှ ဗန်ကောက်နှင့် အခြားရေလမ်းခရီးမြို့ များသို့ မော်တော်သင်္ဘောများဖြင့် အဆက်မပြတ် ကူးသန်း သွားလျက် ရှိကြသည်။ ထင်ရှားသော ရှေးမြို့ဟောင်းကြီး ဖြစ်သည့်ပြင် ပျက်စီးလျက်ရှိသော ဘုရားပျက်၊ ကျောင်းပျက် နှင့် အဆောက်အအုံပျက်များကို ရှေးကအတိုင်း လက်ရာမပျက် ယခုတိုင် တွေ့နေရသေးသောကြောင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ခရီးသည်များနှင့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနှင့် ကမ္ဗည်းကျောက်စာ လေ့လာလိုက်စားသူ အမြောက်အမြား လာရောက်လည်ပတ် ကြည့်ရှုကြသည်။ အယုဓျာမြို့၏ ၁၉၅၇ ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေ လူဦးရေမျာ ၃ဝ၉၄၇ ဖြစ်သည်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၉၁ဝ ပြည်နှစ် တောင်ငူခေတ် တပင်ရွှေထီးလက်ထက်မှ စ၍ ယိုးဒယားနှင့် မြန်မာတို့သည် မကြာခဏ တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြရာ တစ်ခါတစ်ရံ မြန်မာတို့က အယုဓျာမြို့ကို ရောက်ခဲ့ကြ၍ တစ်ခါတစ်ရံ ယိုးဒယားတို့က တနင်္သာရီ၊ ထားဝယ်၊ မုတ္တမထိ ရောက်ခဲ့ကြသည်။ တပင်ရွှေထီး လက်ထက်တွင် အယုဓျာမြို့ကို တစ်လခန့် လုပ်ကြံသော်လည်း မြို့စီးပြစီး ထူထပ်လှသဖြင့် မအောင်မြင်ချေ။ ဘုရင့်နောင်(ဟံသာဝတီ ဆင်ဖြူများရှင်မင်းတရား) လက်ထက်၊ သက္ကရာဇ် ၉၂၅ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၉၃ဝ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အယုဓျာမြို့ကို အလုံးအရင်း ကြီးစွာဖြင့် လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ရာ အောင်မြင်သဖြင့် မြို့နှင့်တကွ ရွှေငွေရတနာ ဘဏ္ဍာများစွာကို သိမ်းယူပြီးလျှင် မင်းညီ၊ မင်းသားများနှင့် မြို့စားမှူးမတ်များ အပါအဝင် သုံ့ပန်း အမြောက်အမြားကို ဟံသာဝတီသို့ ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ သို့သော် မြို့ကြီးကား အပျက်အစီးများစွာ မရှိခဲ့ချေ။ အလောင်းမင်းတရားကြီး လက်ထက် သက္ကရာဇ် ၁၁၂၁ ခုနှစ်တွင် အယုဓျာမြို့ကို ဝန်းရံလုပ်ကြံသော်လည်း မရခဲ့ချေ။ ဤသို့ လုပ်ကြံစဉ်တွင် ကိုယ်တော် မကျန်းမာသည်နှင့် ပြန်လာရာ မုတ္တမကျေးကင်းရွာသို့ အရောက်တွင် နတ်ရွာစံတော်မူသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၁၂၈ ခုနှစ် အလောင်းမင်းတရားကြီးသားတော် ဆင်ဖြူရှင်မင်းတရား လက်ထက်တွင် တစ်ဖန် အယုဓျာမြို့ကြီးကို လုပ်ကြံ တိုက်ခိုက်ပြန်ရာ ဤအကြိမ်သည် အယုဓျာမြို့၏ ပျက်စီးခြင်းအကြောင်း နောက်ဆုံးအကြိမ်ပင်တည်း။ အယုဓျာမြို့ကြီးကို ဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်ရာ၌ မြန်မာတို့က ယိုဒယားမြို့အောက်သို့ ရောက်အောင် ဥမင်ကြီးများ ဖောက်၍ ထင်း၊ လောင်စာ အပြည့်သွင်း၍ မီးခိုးလျှံပြင်းလှသဖြင့် မြို့ရိုးပြိုသည်နှင့် မြန်မာရဲမက်များ ဝင်နိုင်သည်တွင် အယုဓျာမြို့ တစ်မြို့လုံးကိုရ၍ ယိုးဒယားမြို့သား မိန်းမ ယောကျာ်းတို့ကို သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းယူသည်။ အိမ်ရာ၊ ကျောင်း၊ ကန်၊ ဇရပ်၊ တန်ဆောင်းများကို အနှံ့အစပ် မီးတိုက်ရှို့သည်။ ဤတွင် ယိုးဒယားဘာသာ ရာဇဝင်စာပေ အမြောက်အမြား ပျက်စီးဆုံးရှုံးသည်ဟု ဆိုသည်။ အယုဓျာမြို့မှာ မြို့ပျက်ကြီး အဖြစ်သို့ ရောက်သွား၍ နောက်ထပ်မြို့ကို မထူထောင်တော့ဘဲ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ပြောင်း၍ မြို့နန်းထူထောင်လေတော့သည်။ 
၂ In popular culture
In popular culture[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ George Modelski, World Cities: –3000 to 2000, Washington DC: FAROS 2000, 2003. ISBN 2-00309-499-4. See also Evolutionary World Politics Homepage.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အယုဓျာ&oldid=502473" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။